» स’क्किगोनीमा किन देखिन छोडे ‘पाडे’ अर्जुन घिमिरे ? स’क्किगोनीमा किन देखिन छोडे ‘पाडे’ अर्जुन घिमिरे ? – हाम्रो खबर
स’क्किगोनीमा किन देखिन छोडे ‘पाडे’ अर्जुन घिमिरे ?
admin 243 Views
काठमाडौं ।अर्जुन लामो समयदेखि सक्किगोनि नदेखिनुको कारण भने पि’डादा’यी छ। झन्डै तीन महिनादेखि आमा अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएका का’रण उनी पी’डामा छन्। आमालाई म’स्तिष्कघा’त भएर अस्पताल भर्ना गरिएदेखि सक्किगोनिका मुख्य कलाकारमध्येका एक अर्जुन घि’मिरे त्यसमा देखिएका छैनन्।
सधैं उनको प’र्खाइमा टेलि’भिजन अगाडि रहने दर्शक भने महिनौंसम्म उनीलाई नदेख्दा निराश भइरहेका छन्। दर्शकलाई सधैं हँसाइरहने उनै अर्जुनका अगाडि भने यतिबेला आमा बि’रामी भएका कारण दुःखको पहाड उभिएको छ। आमालाई मस्तिष्कघा’त भएर अस्पताल भर्ना गरिएको कारण पाँडे बुढा सिरियलबाट टाढा रहेर आमाप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन्।
अर्जुन हिजोआज ग्रिन सिटी अस्पतालमा अ’चेत अवस्थामा उपचाररत आमाको स्याहार—सुु’सार र त्योभन्दा बढी चि’न्तामा छन्। ‘मम्मीलाई ब्रेन ह्या’म्ब्रे’ज भएको लामो समय भइसकेको छ, तर पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सु’धार आउने आशामा अस्पताल परिसरको च’क्कर का’टिरहेको छु।
सुधार भने आउन सकेको छैन’ अर्जुन दुःख पोख्छन्— ‘उहाँको स्थिति क्रि’टिकल नै रहेकोले ममीको यस्तो अवस्थामा मलाई सिरियलको सु’टिङमा जाने मुड नै भएन। आमालाई गा’ह्रो परिरहेका बेला दर्शक हँसा’एर हास्य सिरियलमा खेल्ने हिम्मत ममा भएन।
त्यसकारण अहिले सिरियल छोडेर मम्मीकै हेरचार गरिरहेको छु।’ सक्किगोनिमा आफूलाई हेर्न प्र’तीक्षारत दर्शकलाई अर्जुन आफ्नो अवस्था सहज भएपछि मात्र सिरियलमा फर्कनने बताउँछन्। ‘अहिले म हस्पिटलमै बसिरहेको छु। मलाई दाइहरूले पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ।
अब मम्मीको स्वास्थ सामान्य अ’वस्थामा आएपछि र स्थिति सहज भएपछि फेरि सक्किगोनिमार्फत दर्शकमाझ आउनेछु’ उनी भन्छन्। अर्जुन सुनाउँछन् ‘डाक्टरहरू ममीको स्वास्थ्यको ख’टिइरहनुभएको छ। हामी उहाँको स्वा’स्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छौँ।
उनले थपे— ‘ममी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न ती’न महिनादेखि ग्रिन सिटी अस्पतालमा संघर्षरत हुनुहुन्छ। भगवान् छन्, छैनन्, त्यो त थाहा भएन। यदि, छन् भने हाम्रो पुकार सुनेर आमालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिनोस्। हामी यही एउटा जी’वित आशा बोकेर उहाँलाई कुरिरहेका छौं।’नेपाल समाचारपत्र बाट
“एमसीसीबारे गलत, भ्रम फैलाईयो, अमेरिकाको, कुनै स्वार्थ छैन, पास गर्नु पर्छ: डा. रामशरण महत”
“एक महिना नहुँदै राज्य,काे ३७ अर्ब २० कराेड बचाउने देशकै पहिलाे, अर्थमन्त्री शर्मा”
“एमसिसि पास नभए, शेर बहादुर देउवाले, मन्त्रीमण्ड बिस्तार नगरी, सरकार विघटन गर्ने चे,ताव,नी
“हिजोको त कास्टीङ मात्रै हो, अग्नी सापकोटालाई, फूल भर्सन, अब देखाउँछौँ :महेश बस्नेत”